Suldan Xasan Suldan C/laahi oo ka dareen celiyay hadalkii kasoo yeedhay Suldan Maxamed Suldan C.qaadir. |
Suldan Xasan Suldan C/laahi oo ka dareen celiyay hadalkii kasoo yeedhay Suldan Maxamed Suldan C.qaadir.
Hargaysa(GNN)Suldaanka Guud Ee Beelaha Subeer Awal Suldaan Xasan Suldaan C/lahi Suldaan Cabdiraxmaan ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay hadalo ka soo yeedhay suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo uu ku sheegayay in ay isu soo dhawaan doonaan dalalka somaliland iyo Somalia
suldaan xasan oo qoraal kooban ku baahiyay barta uu ku leeyahay facebookga ayaa waxa uu yidhi.
iyo riyo dhalanteeda oon cago ku taagnayn guud ahaan iskusoo wada xooriyoo hadalkiisu waa hawo gabal ka dhac ah, waa hadal ka jilicsan xuub caaro jawaabna u baahnayn.intaas waxa uu raaciyay isaga oo hadalkiisa siiwata waxaana uu yidhi.” isla mar ahaantaana kuba haboonayn in aynu wakhti isaga lumino ku mashquulo wax kasoo qaadno asaga laftiisaa og in aan xaajadasi dalkani oolin cid kula riyoonaysaana joogin ama ku uunayn Runta biyo kama dhibcaanka ahi tahay in qarankani siqiir iyo kabiir Raasamalka aynu haynaa yahay gobonimada eebe ku galaday gayigan ee dawladnimadaa aynu hadhsanayno hadaan murtiyeeyo waaqaca yaala dalkani waa soomaliland.